Salaamanews » 2013 » January » 09
Home » Diyaaradaha aan ciddina wadin ee Mareykanka oo Pakistan ku dilay hogaamiyeyaal Al-qaacidda ka tirsan oo ka soo dagaallamay Soomaaliya.
(Salaamanews)-Xukuumadda Washington ayaa shaacisay in diyaaradaheeda dagaalka ee loo yaqaan drones-ka oo aan duuliya wadan ay doqeyn xoog leh ka geysteen gobolka waqooyi galbeed Pakistan halkaasi oo ay ku dileen hogaamiyeyaal ka tirsan shabakadda Al-qaacidda.
Ugu yaraan todobo ka tirsan kooxda mintidka ah ee Taliban ayaa la sheegay inay ku dhinteen doqeynta oo ka dhacday magaalada Mir Ali, oo dhacda... Tags: warar Talyaaniga oo Soomaaliya ballan qaadyo u sameyey (Daawo kulanka labada wasiir)
(Salaamanews)Raisal wasaare ku xigeen ahna wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya Marwo Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa magaalada Roma ee xarrunta dalka Talyaaniga kula kulantay dhigeeda dalkaas Mr. Giulio Terzi ka dib markii ay booqasho ku tagtay dalkaas.
Labada wasiir oo qaatay saacado dhowr ah ayaa waxa ay ku gorfeeyeen arimo ay ka mid tahay adkeynta xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Talyaaniga, iskaadhig... Tags: warar Mareykanka oo labo nin oo u dhashay dalka Suudaan ku daray liiska dadka la doon-doonayo, islamarkaana dul-dhigay maalaayiin doollar.
(Salaamanews)-Dowladda Mareykanka ayaa labadan muwaadin ee u dhashay Sudan ku dartay liiska madoow ee argagaxsisada caalamka iyadoo ku eedeysay inay ka dambeeyeen dilkii sanadkii 2008 magaalada Khartuum ee caasimadda Sudan loogu geystay diblumaasi Maryekan ahaa iyo darawalkiisii.
Aqalka go’aanka Mareykanka ayaa labadaasi nin dul dhigay adduun lacageed oo gaaray midkii $5 million oo dollar, iyadoo... Tags: warar Soo Dhaweenta Faqi Bashir Abdulle Osman MPLS MN	Daawo muuqaallo kale	Maqaallo »